विकल्पका लागि ‘निष्पक्ष सक्रियता’ - Ratopati
गएको साता फ्रान्समा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा वैकल्पिक राजनीतिक धारको नेतृत्व गर्दै आएका इम्यानुअल म्याक्रोन अप्रत्यासित रुपमा निर्वाचित भएका छन् । उनको विजयीसँगै समग्र विश्वभर फेरि वैकल्पिक राजनीतिले चर्चा मात्र पाएको छैन परन्तु यसको अपरिहार्यता र बढ्दो आकर्षण पनि स्थापित हुनपुगेको छ ।
पूर्वमन्त्री म्याक्रोनले परम्परागत राजनीतिबाट आर्थिक सङ्कटमा फस्दै गएको फ्रान्सको उद्धार हुन नसक्ने भन्दै अघिल्लो वर्ष मात्र उनले फ्रान्सेली गणतन्त्र र समग्र युरोपकै भविष्यका लागि पारम्परिक राजनीतिको चङ्गुलबाट बाहिर निस्केर नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक धार निर्माणको कसरत गरेको थिए । उनको समृद्ध र गतिशील फ्रान्सेली गणतन्त्रलाई ‘गणतन्त्रको मार्चपास’ अर्थात् ‘दी रिपब्लिक वाकिङ्ग (ला रिपब्लिक एन मार्च)’ नामकरण गरेरै राजनीतिक अभियान सुरु गरेका थिए । तिनै म्याक्रोन अहिले समग्र युरोपकै शक्तिशाली देशको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन् । उनको यो विजयसँगै फेरि एकपटक विश्वव्यापी रुपमा वैकल्पिक राजनीतिको आवश्यकता र अपरिहार्यताको सान्दर्भिकता थप पुष्टि भएको छ ।
‘थाहा आन्दोलन’का प्रणेता रुपचन्द्र विष्टको एउटा भनाइ छ– ‘हामी कसैका होइनौँ, कोही हाम्रा होइनन् । हामी सत्य र न्यायका, सत्य र न्याय हाम्रो ।’
रुपचन्द्र विष्ट, जो नेपालको प्रगतिशील राजनीतिक आन्दोलनका एकल अभियन्ता थिए, उनलाई अहिले कुनै अमूक पार्टीले अगुवाको दलील पेश गर्ला नै तर, उनले आफ्नो जीवन कालमा जे गरे, जे बोले र जसरी आफ्नो जीवन गुजारे, शायद उनले जीवनभर ‘निष्पक्ष सक्रियता’को पूर्ण अभ्यास गरे । उनले मात्र बोलेनन्, बोलेका कुरा व्यवहारमै गरेर देखाए । उनी कसैको पक्ष वा विपक्षमा लागेनन् । उनी पक्षमा लागे त केवल न्याय र सत्यको । उनी मानिसहरुमा विवेकको बत्ती बाल्दै ‘अथाह’लाई ‘थाहा’मा बदल्ने चेष्टा गर्दै हिँडे । उनले आफ्नो जीवन नै त्यसैमा व्यतीत गरे ।
अहिले देशमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ । पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको मतदानका लागि अब दिन होइन, घन्टाको प्रतीक्षा हुँदैछ । राजनीतिक दलका नेताहरु आआफ्नो पार्टी पङ्क्तिलाई जिताउनका लागि जनतास“ग मत मागिरहेका छन् । स्वभाविक हो, निर्वाचनको समयमा सबैले आफ्नो आफ्नो कुरा गर्ने नै भए । निर्वाचनको सँघारमा आइपुग्दा सबै नेता–कार्यकर्ताहरु पक्ष विपक्षमा बा“डिएका छन् । कतिपय ठाउ“हरुमा त एकले अर्काविरुद्ध अनर्गल प्रचार मात्र होइन, आपसी झडपसमेत भएका खबरहरु आएका छन् । चुनावी झडपमै दोलखामा एकजना युवा मारिएको दुःखद खबर पनि सार्वजनिक भएको छ ।
बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भनेझैँ यदि पारम्परिक राजीतिबाट नै मुलुक समृद्धि हुनेथियो भने यत्तिका वर्ष हामीले किन खेर फाल्यौँ ? देशमा परिवर्तनको हावा चलेको ७० वर्ष भइसक्यो । यत्तिका लामो समयमा पनि हाम्रा सामान्य आवश्यकताहरु पनि पूरा हुन सकेनन् किन ?
सरी हेर्दा वैकल्पिक धारको नेतृत्व गर्दै समकालीन राजनीतिक मुद्दालाई विकास र समृद्धिको परिभाषासहित एउटा युगान्तकारी फड्को दिनसक्ने दूरगामी दृष्टिकोण भएको पार्टी भनेको नयाँ शक्ति नै हो । अनि परिवर्तन र समृद्धिका एजेन्डालाई दरोस“ग कार्यान्वयन गर्ने हैसियत पनि निर्माण गर्न सक्ने र त्यस अनुरुपको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनलाई ठीक आँकलन गरेर मुलुकको अग्रगामी रुपान्तरणका लागि नेतृत्व प्रदान गर्नसक्ने दल नयाँ शक्ति नै हो ।
यसर्थ परिवर्तन र समृद्धि चाहने हो भने नयाँ शक्ति नै समकालीन राजनीतिमा वैकल्पिक शक्ति हो । यस मानेमा आम मतदाताले अब निष्पक्ष सक्रियता देखाउनुपर्छ । निर्वाचनमा परिर्वतनलाई संस्थागत गर्न सक्ने र आर्थिक विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई जनहितमा कार्यान्वयन गर्नसक्ने शक्तिको पहिचान गरी त्यसलाई मत दिनुपर्छ, तब मात्र अहिले मूल धारमा रहेका विकास र समृद्धिका एजेन्डाहरुले सही स्पेश पाउनेछन् र तिनको जनपक्षीय कार्यान्वयन सम्भव हुनेछ ।
कम्तीमा नेपाली मतदाताहरुले पनि अब विकास र समृद्धिका पक्षधर शक्तिलाई आफ्नो मत दिएर जिताउनु जरुरी देखिन्छ । जनताले एजेन्डा हेरेर सत्य, न्याय, विकास र समृद्धिको पक्षमा अब निष्पक्ष सक्रियता देखाउने बेला भइसकेको छ ।